Wax Ka Ogow Qaabka Ay U Tababartaan Goolhayaasha Kooxaha Kubbadda Cagta Soomaaliya – Goobjoog News
Shaqada goolhaya ma ahan mid fudud waxa ay ka mid tahay tan ugu adag ay qabtaan dadka bartay xirfadan qubarada ciyaaraha waxa ku sheegaan in goohayaha uu kaalin weyn ay ku lee yihiin ciyaaraha kubbadda cagta.
Macalimiinta farsamada u qaabilsan goolhayaasha Xiriirka kubbadda cagta ayaa da’daal badan ku bixinaya horomarinta goolhayaasha dalka,iyagoo tababaro kala duwan siiya dhallinyarada shabaqa u ilaalisa kooxaha kubbadda cagta iyo heerar kala duwan ee xulka Qaranka Soomaaliya.
Xasan Faarax Axmed waxa uu ka tirsanyahay macalimiinta inta uga badan tababarka siiya goolhayaasha kubbadda cagta Soomaaliya waxa uu Goobjoog u sheegay in goolhayaasha uu saaranyahay waajib adag maadaam ay kaalin weyn ku lee yihiin isku xirka kooxda oo dhan.
Goolhayaasha kooxaha kubbadda cagta oo tababar adag ku sameeya garoonka Jamaacadaha ee degmada Hodan ayaa inoo sheegay in xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya uu da’daal badan ku bixiyo aqoonta iyo kor u qaadida goolhayaasha si ay ula jaanqaadan dhigooda qaarada Afrika iyo kuwa caalamka.
Cabdi Wali ColaadQanyare (Gaatamow) oo horay ugu soo ciyaaray xulka qaranka iyo kooxda Muqdisho City Club ayaa qeexay in goolhayaasha kubbadda cagta ay waqti kasta la baro wixii ku soo kordhay caalamka iyagana laga rabo wixii lagu tababaray in ay ku dabaqaan tartamada ay ka qeybgalayaan gudaha Soomaaliya.
Halkan Ka Daawo Warbixin Ku Saabsan Tababarka Goolhayaasha Kooxaha Kubbadda Cagta Soomaaliya